15 basaas oo ka tirsan Mossad ayaa lagu xidhay Turkiga - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka 15 basaas oo ka tirsan Mossad ayaa lagu xidhay Turkiga
15 basaas oo ka tirsan Mossad ayaa lagu xidhay Turkiga
Turkiga ayaa xidhay koox ka kooban 15 qof bishii hore kuwaas oo u basaasayey Mossad-da Israel, warbaahinta Turkiga ayaa werisay Khamiisa maanta.
Sida laga soo xigtay Turkiga, wakiiladu waxay siiyeen Mossad waa wakaaladda sirdoonka qaranka Israele macluumaad ku saabsan ardayda ajnabiga ah ee wax ku barata jaamacadaha Turkiga, iyadoo xoogga la saarayo kuwa ka shaqayn kara wershedaha difaaca.
Sabah, oo ah warbaahinta Turkiga, ayaa sidoo kale sheegtay in mid ka mid ah wakiilada, oo loo yaqaan A.B. uu fuliyey hawlo sirdoon oo ku saabsan siyaabihii ay Falastiiniyiintu ku galeen jaamacadaha Turkiga, iyo tasiilaadka la siiyay. Wuxuu ka shaqaynayey waraaqaha lacag bixinta waxaana la sheegay in la waayay June 2021 si uu u marin habaabiyo ciidamada ammaanka Turkiga.
Laba wakiil oo kale, oo lagu calaamadiyey R.A.A. iyo M.A.S., ayaa sidoo kale lagu qoray inay yihiin dad maqan.
Hawlgalka basaasnimada ayaa bilaabmay Oktoobar 7, in uu fashilmo ka dib markii la fulinayey muddo sannad ah. Koox 200 oo qof ah ayaa xidhay 15 wakiil oo ku kala sugnaa afar gobol, iyaga oo u kala qeybiyey shan unug oo kala duwan oo midkiiba 3 qof yahay.
Baadhitaanka ayaa la filayaa inuu sii qoto dheeraado, iyada oo la soo diyaarin doono dacwad dhammaystiran marka su’aalaha la dhammeeyo.
Xidhiidhka Israa’iil iyo Turkiga ayaa xumaaday dhowrkii sano ee la soo dhaafay, in kasta oo uu sii jiray xidhiidhka dalxiiska iyo ka ganacsigu.
Bishii Luulyo, Israa’iil iyo Turkiga waxay ku heshiiyeen inay ka shaqeeyaan hagaajinta xidhiidhka xumaaday kadib markii madaxweynayaasha labada dal ay is dhaafsadeen taleefanno.
Previous articleMasar: Ku dhawaad 100 haween ah ayaa noqday haweenkii ugu horreyey ee garsoore ka noqota Golaha Dawladda
Next articleShaabad Amethyst ah oo dhif ah oo lagu xardhay geedka Luubaanka ayaa laga helay Qudus (Jerusalem)